मिजुवारी के हो?-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
Mizuwari के हो?
"हे भगवान!" स्कटहरूले मिजुवारीलाई देख्दा के भन्नै पर्छ। व्हिस्कीमा यति धेरै पानी कसरी थप्न सकिन्छ, यसले व्हिस्कीको गुणस्तर र स्वादलाई मार्दैन? मिजुवारी, यद्यपि यसले स्कट क्रिन्ज बनाउँछ, वास्तवमा जापानमा व्हिस्की पिउने एक धेरै सामान्य तरिका हो।
Mizuwari को परिभाषा
जापानमा मिजुवारी भनेको दुई भाग मिनरल वाटर र बरफ भएको एक भाग व्हिस्की हो। यसको शाब्दिक अर्थ "पानी संग मिश्रित" हो। गिलासमा बरफको मात्रा महत्त्वपूर्ण छ। एक गिलास मिजुवारी खानाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म रहनुपर्छ। यदि त्यहाँ धेरै थोरै बरफ छ भने, तपाईंको व्हिस्की मिठाईको सेवा गरिसकेपछि पर्याप्त चिसो हुनेछैन; यदि त्यहाँ धेरै बरफ छ भने, तपाइँ यो सबै पहिलो चुस्कीमा पिउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो सरल लाग्न सक्छ, Mizuwari बनाउने बारे जान्न धेरै छ।
Mizuwari को नियम
जब तपाइँ जापान भन्नुहुन्छ, तपाइँ नियमहरू सोच्नुहुन्छ। मिजुटाकी सिरपमा पानी थप्ने जत्तिकै सतही छैन। यो उत्तम तयारी हो जसले एक उत्तम Mizutaki बनाउँछ। उनीहरूले जापानी बारमा मिजुवारी कसरी तयार पार्छन् भन्ने हेर्नु एक आकर्षक शो हो, यो अनौठो तरिकाले मात्र होइन तर प्रत्येक कदम चाल्ने सावधानी पनि हो।
1. फराकिलो मुख र समतल तल भएको गिलास छान्नुहोस्, गिलासको मोटाई र गुणस्तर ढिलो हुनु हुँदैन।
2. गिलासमा आइस क्यूबहरू राख्नुहोस्, गिलासलाई चिसोमा ल्याउनुहोस् र त्यसपछि आइस क्यूबहरू खन्याउनुहोस्।
3. नयाँ आइस क्यूबका कुनाहरू हटाउनुहोस्, तिनीहरूलाई गोलाकारमा थोरै काट्नुहोस् र गिलासमा राख्नुहोस्।
4. बिस्तारै र बिस्तारै व्हिस्कीमा हाल्नुहोस्, सावधानीपूर्वक हलचल गर्नुहोस्
5. बिस्तारै खनिज पानी थप्नुहोस्। खन्याउने प्रक्रियाको प्रत्येक चरणले व्हिस्कीको सुगन्ध जारी गर्दछ।
6. जब सबै पानी थपिएको छ, जोडदार रूपमा हलचल, तर हलचल लठ्ठी संग आवाज नगर्नुहोस्।
मिजुवारको मजा लिने समय छ
1. जब यो तातो हुन्छ: जब तापक्रम बढ्छ, एक चिसो, तिर्खा मेटाउने Mizuwari प्राथमिकता हो
2. खानाको आनन्द लिँदा: व्हिस्कीले वाइनलाई क्रसओभर पेयको रूपमा बदल्न सक्छ। यो जापानमा राम्रो भोजनको लागि एक सामान्य संगत हो।
3. पहिलो पटक व्हिस्कीको मजा लिँदा: मिजुकावाको जादूले "कहिल्यै व्हिस्की मन पर्दैन" भनी दाबी गर्नेहरूलाई उनीहरू गलत छन् भनेर विश्वस्त पार्ने निश्चित छ।
अघिल्लो: ब्रान्डी र व्हिस्की बीचको भिन्नता
अर्को: ह्याङ्गओभरहरू रोक्न र राहत दिने बारे सुझावहरू